Author: Fekazahn Taut
Qodobka 61aad-Dhaqangellinta Awoodaha wadaagga ah ee sharcidejinta ee dawlad-goboleedyada. Tirsiga taariikhda waxa laga raacayaa tan lslaamiga ah ee Hijriyada iyo tan Miilaadiyada ah. Xeerka ayaa caddeynaya ciqaabta ka dhalan karta gudasha la’aanta waajibaadka ku xusan faqradda laad, 2aad, 3aad iyo 4aad.
Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay aaminsan tahay mabaadi’ida aayo-ka-talinta ummadaha adduunka. Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay dhawraysaa heshiisyadii ay Dawladdii hore 1o odhan jiray Soomaaliya la gashay shirkad ama dawlad shisheeye, haddii aanu ka hor imanayn danta iyo maslaxadda Jamhuuriyada Soomaaliand.
Wasiirada ama Wasiir-ku-xigeenadu ma qaban karaan shaqo kale oo ka baxsan tan Qaranka. Uu jabo shardi ka mid ah shuruudihii lagu soo doortay; ama uu gudan waayo xilkiisa.
Midnimada dalka Israacsanaanta dhul-ahaaneed. Ma bannaana in laga qaado xubinta Golaha Wakiilada tallaabo baadhitaan ama waraysi ama qabasho ama xidhitaan ama tallaabo kale oo ciqaab la xidhiidha iyadoo oggolaansho looga helo Golaha Wakiilada mooyaane. Kal-fadhigiisa ugu horreeya Golaha Guurtida waxa uu ku ansixinayaa xeer hoosaadka Golaha. Waxaa ka reebban xukunkaas faqradda laad wixii cay ama aflagaado ah ee xubintu geysato.
Waxa fadhiga Guddidu ku ansixi karaa marka ay joogaan toddoba 7 xubnood. Xubinta Golaha Guuridu waxa ay waayi kartaa xubinnimadeeda haddii ay burto shuruud ka mid ah shuruudihii Iagu soo xushay, ama ay gudan waydo xilka sida uu u caddaynayo xeer -hoosaadka Golaha Guurtidu.
Islaamku waa Diinta Dowladda. Uu jabo shardi ka mid ah shuruudihii lagu soo doortay; ama uu gudan waayo xilkiisa; 4. Sidaas darteed, dawladdu waxay xil iska saaraysaa shaqo abuuris iyo tayaynta tababarada shaqaalaha. Fadhiga ugu Horeeya ee Golaha Guurtida.
Haddi kale waqtigaas waxaa loo tixgelinayaa in uusan aheyn muddo xileed marka la fiiriyo u jeedooyinka qodobka ee muddo xileedka Madaxweynaha. Ma bannaana in garsooruhu qabto shaqo kale inta uu hayo xilka Garsoorka.
Xukun dembi ah oo xilka lagaga xayuubiyay. Reebbanaanta Qabashada Xil Kale. Soomaaliya waa dal Islaam ah, dadkiisuna ku abtirsadaan dunida Carabta iyo Afrikaanka. Haddii qofna shuruudahaas buuxin waayo waxaa la tartansiinayaa labada musharrax ee helay tirada ugu badan codadka la bixyay. Waa inay dhiirri-gelisaa xiriir saaxiibtinnimo oo ay yeeshaan xukuumadaha ka jira meelaha kale ee dalka iyo dadweynahooda.
Wasiirada iyo Wasiir-ku-xigeennada waxa ku waajib ah inay ka qayb galaan fadhiyada Golaha Wakulada iyo Guddiyadiisa haddi qoraal lagaga codsado sidaa; waxaanay xaq u leeyihiin inay ka qayb qaataan doodda; hase yeeshee xaq uma laha codayn.
Dastuurka waxa saldhig u ah mabaadi’da Islaamka. Cutubka 12aad Heerarka kala Duwan ee Shaqaalaha dowladda ee Rayidka.
Waxa Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka Madaxweynaha Iagu dooranayaa qaabka doorashada guud oo toos ah; isla markaana qarsoodi ah iyaga oo isku lammaan. Dhaqan-gelinta Dastuurku waxay ka bilaabmaysaa marka afti loo qaado, natiijada aftiduna soo baxdo, waxana si ku meel gaadha loogu dhaqmi karaa muddo saddex sannadood gudahood ah oo ka bilaabmaysa taariikhdii uu oggolaaday shirweynihii 3aad ee Beelaha Somaliland.
Oggolaan kara ama wax-ka-beddel soo jeedin kara. Cutubka 1aad – Baaqa Jamhuuriyadda. Cutubka 7aad Qaab-Dhismeedka Federaalka ee Jamhuuriyadda. Haddii uu ku qanci waayo Madaxweynuhu warbixinta Sastuurka Guud, wuxuu amrayaa inuu Xeer-ilaaliyaha Guud la noqdo dacwadiisa.
Madaxweynaha iyo Madaxweyne-ku-xigeenka hore ayaa sii wadi doona hawlaha ay u xil-saarnaayeen ilaa Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka cusubi kala wareegaan xilka muddo bil ah gudaheed. Qodobka 98aad-Xil-ka-qaadista Madaxweynaha 1 Madaxweynaha Jamhuuriyadda waxaa xilka looga qaadi karaa oo keliya marka uu ku xadgudbo dastuurka, ku tagri-falo awooda xafiiska ama uu galo khiyaamo qaran.
Ciidamda Booliska iyo Asluubta. Waxaa ka reebban muddada uu Wasiirku ama Wasiir-ku-xigeenku sugayo in xilka laga tiriyo inuu cid xil u magacaabo ama heshiis magaca Wasaaradda cid kale kula gab. Hoggaaminta siyaasadda guud ee Xukuumadda.
Xilka xeer-dejintu uma wareegi karo cid ka baxsan Baarlamaanka. Eedaysanuhu waa dembi-laawe inta aanu maxkamad horteed kaga caddaanin dembi. Shir ku saabsan dastuurka cusub ee Soomaaliya oo soo idlaaday iyada oo uu madaxweynuhu ballan qaaday in la dardar gelin doono hannaanka dib-u-eegista.
Xukuumad waliba waa inay ilaalisaa xuduudda awoodaheeda iyo awoodaha kuwa kale. Xubinnimada Guddida Culimada waxay ku bannaanaan kartaa: Kenya, halganka xooggan oo lagu doonayey in lagu badallo dastuurka, ayaa ka socday tan iyo horaantii sagaashameedyadii, tiina afti loo qaaday dastuur cusub ayey shacabku diideen.
Madaxweynuhu dalka kama maqnaan karo 45 cisho oo isku xiga muddo ka badan sabab caafimaad mooyaane. Jagada Cuskb Guurtidu waxay ku bannaanaysaa haddii ay timaado xaalad ka mid ah xaaladaha ku tilmaaman qodobka 50aad. Awoodda Garsoorka u Gaarka ah. Iraq lawmakers criticise Trump visit as blow to Iraqi sovereignty December 27, Rabshadahaasi, waxaa lagu soo afjaray heshiis awood qeybsi ah, oo ay wada gaareen Madaxweyne Kibaki iyo Raisal Wasaare Odinga.
Xorriyadda Dhaq-dhaqaaqa iyo Is-abaabulka.
Next story LIBROS DE ANTROPOMETRIA Y ERGONOMIA PDF
Previous story CHRISTOPHER LASCH LA CULTURA DEL NARCISISMO PDF